Dabeylo xoogan oo ku dhuftay deegaanka Raage Ceelle – Radio Muqdisho
Dabeylo xoogan oo ku dhuftay deegaanka Raage Ceelle
Dabeylo xoogan oo qasaare dhalayaay ayaa ku dhuftay Deegaanka Raaga Ceelle ee Gobolka Shabeelaha Dhexe, ayadoo ay socdaan qorshayaal mamaulka Gobolka uu ku doonayo in uu ku booqdo dadkii musiibadu ku habsatay.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Gobolka Shabeelaha Dhexe Abuukar Bacadle ayaa sheegay in dabeylo xoogan ay ku dhufteen deegaanka Raage Ceelle abaaro 5:00 pm, (Shantii galabnimo) ,kuwaasi oo geystay qasaare isugu jirta bur bur guryo iyo barakac.
Dadka deegaanka ayaa bilaabay in u gurmadaan dadkii uu ku dumay guryaha ay deganaayeen, iyadoo aan la sheegin qasaare dhimasho ah.
Maamulka Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa lagu wadaa in uu gaaro halka ay mashaqadu ka dhacday, si uu ugu kuurgalo qasaaraha ka dhashay duufaanta dabylaha wata ee ku dhufatay deegaanka Raage Ceelle.
Cadaado oo laga taageeray Golaha Wasiirada